Tag: chinokugezi | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 25, 2017 Svondo, November 26, 2017 Adam Mudiki
Ndichiri kushamisika nenhamba yenzvimbo dzisati dzaonekwa pane nharembozha - kusanganisira vaparidzi vakuru kwazvo. Tsvagurudzo yeGoogle yakaratidza kuti 50% yevanhu vachasiya webhusaiti kana isiri nhare-inoshamwaridzika. Hausi iwo chete mukana wekutora vamwe vaverengi, kugadzirisa yako saiti yekushandisa nhare kunogona kusimudzira ruzivo rwako rwevashandisi sezvo iwe uchiziva kuti vanhu parizvino vari kufamba! Nemhando dzakasiyana siyana dze
Mavhiki mashoma apfuura, ndakave nemufaro wekuteerera kuna ExactTarget Chief weMabasa, Scott McCorkle, kutaura nekushanduka kwepuratifomu yavo. Ini ndanyora munguva yakapfuura kuti ini ndinotenda Email Vashandi veVanopa vakasvetuka shark - uye zvinoita sekunge kumberi-kufunga ESPs vakatotora kucherechedza. Scott akataura nechinangwa cheExactTarget yekuve Kushambadzira Hub yemakambani. Panzvimbo pekungova injini yekutumira yeemail, ExactTarget irikusundidzira ku